Imiqondiso ye-Forex yasimahla Amaqela eTelegram 🥇Ephezulu yesi-5 kuJanuwari ka-2022!
A Imiqondiso ye-forex yocingo iqela lingathatha iinzame zakho zokurhweba lwemali ukuya kwinqanaba elilandelayo kakhulu. Uya kufumana iingcebiso zokurhweba onokukopa kuzo Yocingo MT4. Ezi ngcebiso zokurhweba ziya kuchaza ukuba yeyiphi na into yokuthenga / yokuthengisa, yokungena, kunye nokuphuma kwee-odolo ekufuneka uzibekile- kwaye ngawaphi amaxabiso.
Oku kukuvumela ukuba uzuze kuhlalutyo olunzulu lobuchwephesha ngaphandle kokufuna ukuphakamisa umnwe. Ngale nto ithethwayo, imeko yokurhweba kwangaphambili inokuhamba ngesantya esikhawulezayo.
Kungenxa yoko le nto ucebise ngcono ukuba usebenzise inkonzo yesiginali ye-forex esasaza izilumkiso ngeTelegram. Ngokwenza njalo, awusoze uphinde uliphinde ithuba lokuthengisa kwangaphambili.
Yiyo kanye le nto siyifundayo 2 Urhwebo olunikezela- inkonzo yesiginali ye-Telegraph egcwele ngokupheleleyo ekubonelela nge-avareji yeengcebiso ezi-5 namhlanje. Funda ukuze ufumane okungakumbi malunga noko sikunika!
Iimpawu ze Forex kwiTelegram zenziwe ngamaCandelo amathathu
Iimpawu zeTelegram ze-forex zilula ukucebisa iingcebiso ezithunyelwa kuwe nge-app. Kwindlela yayo esisiseko, umboneleli wakho owukhethileyo unokukuthumela isilumkiso semali esijongeka njengoku kulandelayo:
Umyalelo wokungena: Thenga i-AUD / CAD nge0.9590
Ukuphulukana nokupheliswa: 0.9520
Thatha Inzuzo: 0.9690
Njengoko ubona koku kungasentla, unikwa yonke into oyifunayo ukuze ubeke iincam ezifanelekileyo kumthengisi we-forex okhethiweyo. Oko kukuthi, uyazi ukuba yeyiphi isibini umqondiso onxulumene nayo, nokuba kuya kufuneka uhambe ixesha elide okanye elifutshane, kwaye loluphi ungeno, ukumisa-ukulahleka, kunye nemiyalelo yenzuzo ekufuneka uyibekile.
Kungenxa yoko le nto imiqondiso ye-forex ithandwa kangaka- njengoko kunciphisa isidingo sokwenza naluphi na uphando lwakho. Emva kwayo yonke loo nto, ukukhululeka ngezalathi zobuchwephesha kunye nezixhobo zokufunda kwitshathi kunokuthatha iminyaka emininzi ukuyiqonda.
Kutheni usasaza imiqondiso ye-Forex ngeTelegram?
Funda i-2 yoRhwebo-njengabanye abanikezeli beempawu ze-forex ezisebenzayo kwisithuba-bagqibe kwelokuba basete ivenkile ngeTelegram. Oku kungenxa yezizathu ezininzi eziphambili. Okokuqala nokuphambili, iTelegram inokukhutshelwa nangubani na ngokucofa iqhosha kwiGoogle Play okanye kwiVenkile yeApp.
Awudingi ukuhlawula nantoni na ukufaka usetyenziso, kwaye akukho ntlawulo yenyanga okanye yonyaka yalo naluphi na uhlobo. Yiyo loo nto iTelegram ngoku ilikhaya labasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-400 kwihlabathi liphela. Uhlelo lokusebenza lweTelegram lusebenza ngendlela efanayo neWhatsapp, okuthetha ukuba uza kuthumela kwaye ufumane imiyalezo ngoqhagamshelo lwe-intanethi.
Ngokombono wethu apha kwi-Learn 2 Trade, oku kuyasivumela ukuba sinikezele ngesiginali yethu yenkonzo yeTelegram kumgangatho wehlabathi. Eyona nto ibaluleke kakhulu, xa sithumela uphawu lwe-forex kumawakawaka amalungu kwiqela lethu leTelegram, umyalezo uthunyelwa ngexesha langempela. Xa ifika, isaziso siya kuphuma kwifowuni yakho.
I-Telegram ye-Forex Signal Community kunye namaLungu anengqondo efanayo
Isizathu esongezelelekileyo sokuba kutheni thina kwi-2 yokufunda sikhethe ukuthengisa iTelegram ngenkonzo yomqondiso we-forex yinkalo yoluntu yesicelo. Umzekelo, ukuba ujoyina inkonzo yethu yomqondiso we-forex, uya kudibaniswa ngokuzenzekelayo kwiqela lethu leTelegram.
Ngokwenza njalo, uya kujoyina iimfumba zamanye amalungu anomdla ofana nofuna ukwenza uzuzo oluhambelanayo kwimeko ye-forex. Ngelixa amanye amalungu ethu engabarhwebi abanamava, amanye agqityiwe. Oku kuthetha ukuba ngaphandle kwamava akho e-forex angaphambili, unokunxibelelana namanye amalungu eqela lakho.
Siyazingca ngommandla wezorhwebo esiwakhileyo ngokusebenzisa iqela lethu leTelegram ye-Forex - njengoko wonke umntu ekulo ukuncedana. Umzekelo, ukuba umntu ubonile intshukumo yobuchwephesha kwiitshathi ze-GBP / ze-USD, banokulazisa iqela leziphumo zabo.
Iimpawu zeTelegram zeTrafti zaSimahla
Ngokwenza uphando olukhawulezayo lwe-intanethi, kunokwenzeka ukuba uzaliswe ziimfumba zamaqela asimahla e-forex amaqela eTelegram. Ngoku, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ukuqhuba kakuhle kwimarike yorhwebo ngokuhambelana akukho lula ukwenza.
Ngokuchasene noko, kuthatha iminyaka emininzi yamava ukufunda, ukuhlalutya, kunye nokutolika iitshathi zamaxabiso kunye nezalathi zobuchwephesha ngokufanelekileyo. Ngenxa yoko, ukuba umboneleli ubonelela ngeempawu zasimahla zeqela leTelegram, kunokwenzeka ukuba kubekho kubamba.
Emva kwayo yonke loo nto, kutheni umboneleli wesiginali enika isosi yakhe eyimfihlo mahala? Into esihlala siyifumana kukuba uphawu lwe-forex yasimahla yeqela leTelegram liya kulwenza mnyama ulwazi oluphambili. Umzekelo, umboneleli unokukuxelela ukuba ufutshane kwi-AUD / NZD ngo-1.08.
Nangona kunjalo, ukuba ayikuniki ilahleko yokuyeka kunye nexabiso lokuthatha inzuzo-awunaso isicwangciso sokuphuma endaweni. Ngamanye amagama, imiqondiso yasimahla yeqela leTelegram liya kukucela ukuba ubhatale ukongezwa ukufumana idatha ebumnyameni!
Funda iiMpawu zoThengiso ze-Forex zoRhwebo ezi-2: Zisebenza njani?
Ukuba umtsha ngokupheleleyo kwihlabathi le-2 yezoRhwebo kunye neenkonzo zethu zomqondiso weTelegram ephezulu, masichaze yonke into oyifunayo.
Iimpawu zeTelegram Forex zibonelelwa liQela lokuRhweba ngaphakathi kweNdlu
Okokuqala nokuphambili, usenokuzibuza ukuba sizifumana phi ezona mpawu ziphakamileyo zeTelegram evela kwiimpawu zangaphambili. Ukubeka ngokulula, sineqela labathengisi bezindlu abanamava apha kwiofisi yethu eseLondon.
Aba barhwebi banoxanduva lokuskena iimarike zokurhweba ngemali ngeenxa zonke. Into ephambili apha kukujonga amathuba okurhweba xa kuvela iindlela ezithile. Ukufezekisa oku, iqela lethu liza kusebenzisa uninzi lwezalathi zobuchwephesha kunye nezixhobo zokuzoba itshathi.
Ngokubalulekileyo, abathengisi bethu abangaphakathi ezindlini basebenza kunye ukuqinisekisa ukuba ababhalisi bethu baqhelene namathuba okwenza inzuzo ngokukhawuleza xa intshukumo yentengiso ichongiwe.
Kuya kufuneka siyicacise into yokuba ukufumana ithuba lokurhweba elinokubakho sisiqingatha semfazwe. Oko kukuthi, thina kwi-Learn 2 Trade siza kuzama nokuqinisekisa ukuba loluphi ungeno olusebenzayo nolunobungozi ekungeneni nasekuphumeni. Njengoko usazi, oku kubandakanya uthotho lweodolo- njengokuthenga / ukuthengisa iiodolo, ii-odolo zokuyeka ilahleko, kunye nee-odolo zenzuzo.
Sigubungela oku kwicandelo elingezantsi.
Ufumana iMiyalelo yoRhwebo ye-Forex ecetyiswayo
Nawuphi na umrhwebi onamava uya kukuxelela ukuba kufuneka usoloko unaso isicwangciso sokungena kunye nokuphuma xa uzibandakanya nomdlalo we-forex. Ngaphandle kwesinye, ungcakaza ngokufanelekileyo. Kungenxa yesi sizathu le nto iqela lethu labarhwebi abasendlini beya kuhlala benenjongo yokufumana inzuzo engqondweni, kunye nengozi yokubeka umngcipheko. Ngaphambi kokuba sifike kuloo nto. masiqale ngexabiso elibaluleke kakhulu lokungena.
Yonke iSayini yokuRhweba nge-Forex iza kunye noThenga / uThengise ngexabiso lokuNgena
Kuzo zonke iimeko ezimbalwa, imiqondiso yethu yeTelegram ye-forex iya kuhlala iza nokuthenga okanye ukuthengisa ixabiso elilinganiselweyo. Okukuphela kwento eyahlukileyo kulo mthetho kukuba ithuba lokurhweba kufuneka lithathwe ngokukhawuleza, oko kuthetha ukuba siza kukuxelela ukuba ubeke i-odolo yentengiso.
Nangona kunjalo, ixabiso lokuyalela umda esikuthumela ngeTelegram liya kubonisa elona xabiso lilungileyo lokungena kwintengiso.
Umzekelo, masicinge ukuba sicinga ukuba kuya kufuneka uhambe ngokufutshane kwi-EUR / JPY-exabiso layo ngoku li-123.06.
Nangona sinokucinga ukuba esi sibini kufuneka sifinyezwe ngokusebenzisa i-odolo yokuthengisa, asicingi ukuba i-123.06 lixabiso elifanelekileyo lokungena kwintengiso.
Ngokuchasene noko, sinokulindela ukuba ixabiso linyuke kwiiyure ezimbalwa ezizayo ngaphambi kokuba lifike kwinqanaba lokuchasana.
Njengoku kungasentla, sinokucebisa ngokufaka i-odolo yakho yomda wokuthengisa kwi-123.78
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, kuphela kwiimeko ezimbalwa kakhulu apho siya kuthi sikhethe i-odolo yentengiso ngaphezulu komda wokumiselwa.
Yonke iTelegram Forex Signal esikuthumelela yona iya kuba neXabiso lokuThatha iNzuzo
Sukuyenza impazamo ngayo-nganye kunye nesiginali yeTelegram esayithumela kuwe iya kuba nexabiso lokuthabatha inzuzo. Ukubeka ngokulula, eli lixabiso esikholelwa ukuba isibini sokuqala se-forex ukufikelela kwixesha elifutshane.
Ukuba kwaye xa oku kusenzeka, i-odolo yakho yokufumana inzuzo iya kuvala ngokuzenzekelayo indawo yakho kwaye ngenxa yoko-itshixe kwiinzuzo zakho.
Sisoloko sithatha indlela ecwangcisiweyo kwiimpawu zethu zeTelegram zangaphambili. Oko kukuthi, siza kuthatha umngcipheko we-1: 3 umngcipheko / umvuzo.
Oku kuthetha ukuba iithagethi zethu zokwenza inzuzo-ngeniso ngokweepesenti ziya kuphindaphindwa kathathu kumngcipheko wethu.
Umzekelo, ukuba sikulungele ukwenza ilahleko ephezulu ye-1%, ke ekujolise kuko ekujongeni inzuzo kuya kuba yinzuzo ye-3%.
Ixabiso lokumisa inzuzo
Ngokufana nee-odolo zenzuzo, ii-odolo zokuyeka ilahleko zizinto eziza kubonelelwa zimpawu zethu zeTelegram zangaphambili. Njengoko sigubungele ngokufutshane apha ngasentla, eli lixabiso nje apho isikhundla sethu siza kuvalwa khona ukuba urhwebo luhamba ngendlela elungileyo.
Ukuba ukunamathela kwi-1: 3 yomngcipheko / yomyinge womvuzo, oku kuthetha ukuba siza kubeka ixabiso lethu lokulahleka nge-1%.
Masicinge ukuba sithengisa i-GBP / i-USD-exabiso layo ngoku kwi-1.2978.
Sicinga ukuba esi sibini siza kuvuka kwiiyure ezizayo, ke simisela iodolo efanelekileyo yokuthenga.
Ukuze ufumane i-1% yokuyeka-ukulahleka kwe-oda, kufuneka sidinge ixabiso kwi-1.2849.
Oku kuthetha ukuba i-GBP / i-USD ukuba yehle kweli nani, urhwebo lwethu luya kuvalwa kwaye ilahleko yethu iya kubanjwa nge-1%.
Ngokusesikweni, oku kuqinisekisa ukuba imiqondiso yethu yeTelegram ye-forex ikuvumela ukuba uthengise ngendlela ephezulu yokubeka emngciphekweni.
Nje ukuba konke oku kungentla kugqityiwe liqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlwini - baya kuthi emva koko baqhubeke nokusasaza ulwazi kumalungu ethu wesiginali we-Telegraph. Ngokwenza njalo, wena njengelungu uya kufumana isaziso kwifowuni yakho ekwazisa ukuba unomyalezo omtsha kwiTelegram.
Ngokuzenzekelayo, uya kuba nakho ukubona phezulu kwifowuni yakho ukuba ngubani lo myalezo uthunyelwe sithi (kunye nathi) kunye nezivakalisi zokuqala zomyalezo othethiweyo. Konke okufuneka ukwenze kukucofa umyalezo wangaphambili ukuze uye ngqo kwiQela lokufunda leTragram 2 yezoRhwebo.
Kulapha apho uza kubona umyalezo onje ngokulandelayo:
isixhobo: I-EURCAD (USUKU LWE-INTRA)
Ixabiso lokungena: 1.5510
Umngcipheko ophakanyisiweyo: 1%
Ngoku, njengoko usenokuba uqaphele, le ntengiso ingentla kwi-EUR / CAD inomngcipheko / umvuzo we-1: 2. Ngokuqinisekileyo, besikhankanyile ngaphambilana ukuba kwiimeko ezininzi sithatha indlela eyi-1: 3, oku akubekwanga ematyeni. Emva kwayo yonke loo nto, imeko yokurhweba kwangaphambili yindawo yokulwa enzima kakhulu kwaye eyahlukileyo.
Kananjalo, kwezinye iimeko, sinokuhambisa isindululo sokurhweba esithatha indlela eyahlukileyo. Umdlalo wokugqibela usafana - sijolise ekubeni sizuze kurhwebo lwethu ngeyona ndlela inobungozi.
Unokuqaphela ukuba isiginali yethu yeTelegram ye-forex ibandakanya inqanaba 'lomngcipheko olucetyiswayo' le-1%. Le yinto ethi yonke imiqondiso yethu yeTelegram ye-forex ibandakanye, inxulumene nesixa semali yorhwebo esicinga ukuba kufuneka ubeke emngciphekweni kule ngcebiso.
Umzekelo, ukuba ibhalansi yeakhawunti yakho yomthengisi ye-forex ime kwi- $ 2,000 emva koko i-1% yenqanaba lomngcipheko elinconywayo liyakubona ukubamba i-20 yeedola kwesi sikhundla. Kananjalo, oku akufuneki kubhidaniswe nexabiso lethu loku-odola ukulahleka.
Ukusebenza kwiiMpawu zeTelegram ze-Forex
Ke ngoku uyazi ukuba isebenza njani inkqubo yesignali ye-Forex 2, ngoku kufuneka sichaze inkqubo yokwenza ngokuthobela iingcebiso zethu. Ngokubalulekileyo, kubalulekile ukuba usebenzise umthengisi we-intanethi okwi-intanethi ohlangabezana neseti yeekhrayitheriya ezibalulekileyo.
Sukuyenza impazamo ngayo-kuya kufuneka usebenzise indawo ye-intanethi yokurhweba kwangaphambili enelayisensi yomzimba owaziwayo. Uninzi lwamaqonga esihlala siwasebenzisa alawulwa ziintandokazi zeCCA (UK), iCySEC (iSipro), kunye / okanye iASIC ​​(Australia). Ekugqibeleni, oku kuqinisekisa ukuba ungayenza imiqondiso yethu yeTelegram ye-forex kwindawo ekhuselekileyo nekhuselekileyo ye-100%.
Izibini ezixhaswayo kwiTelegram yeSiginali ye-Forex
Ngelixa uninzi lweempawu zethu zeTelegram ye-forex sigxile kwiiparitha ezinkulu nezincinci - oku akusoloko kunjalo. Ngokuchasene noko, iqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlwini bahlala befumana amathuba okwenza inzuzo kwiibini ezingamanzi ezingaphantsi.
Umzekelo, oku kunokubandakanya iperi equlathe iRandi yoMzantsi Afrika okanye iRandi yaseKenya. Ngale nto engqondweni, singacebisa ukuba kusetyenziswe i-forex broker enika iimfumba zeebhangqa- kungekuko kwisebe elikhulu nelincinci, kodwa neexotic, nazo.
Ngokwenza njalo, oku kuyakuqinisekisa ukuba uhlala usesimweni sokusebenza kwiingcebiso zethu zorhwebo nje ukuba umqondiso weTelegram ufike.
Njengoko sixoxile kwesi sikhokelo, sihlala sikhetha umngcipheko we-1: 3 umngcipheko / umvuzo. Kwelinye icala, nangona ezi ngeniso ziphakathi, zinokudibanisa ngokukhawuleza ngaphezulu kwenyanga.
Nangona kunjalo, ukubanakho kokunyusa inzuzo yakho kuya kuthintelwa ukuba usebenzisa umrhwebi onganikezeli ngerhafu yokhuphiswano kunye neekhomishini.
Masicinge ukuba ubambisa i-500 yeedola kwenye yeempawu zethu zeTelegram zangaphambili
Umrhwebi wakho omkhethileyo ubiza ikhomishini ye-1 %- yiyo ke loo nto iyi- $ 5 yokubeka iodolo
Injongo yethu yenzuzo ye-3% ifezekisiwe, ke ixabiso lakho leedola ezingama-500 ngoku lixabisa i-515 yeedola
Ushiya isikhundla-kwakhona uhlawula ikhomishini ye-1 %- iyonke eyi- $ 5.15
Kananjalo, ubhatale i-10.15 yeedola kwikhomishini kolu rhwebo
Njengokungasentla, oku kwenza ukuba urhwebo lube ngandlel 'ithile, njengoko ubuya kuhlawula ngaphezulu kwikhomishini oyifumene ngeniso. Kungenxa yoko le nto sicebisa kuphela amaqonga e-forex akuvumela ukuba uthengise ngendlela ekhululekileyo ye-100%.
Ngokwenza njalo, urhwebo olungentla lungakuvumela ukuba ugcine zonke iidola ezili-15 ezizuzwe ngumqondiso weTelegram ye-forex. Ukongeza kwiikhomishini, kuya kufuneka uqinisekise ukuba umthengisi okhethiweyo unikezela ngokusasazeka okuqinileyo.
Le yintlawulo engathanga ngqo ehlala ihoywa ngabathengisi be-newbie. Kwabo abangaziyo, i sasaza ngumahluko nje phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa ixabiso lesibini semali esinikezelwa ngumrhwebi wakho. Kwiimeko ezininzi, abathengi bethu abanconywayo banikezela ukusasazeka okungaphantsi kwe-1 pip yezibini eziphambili.
Kukwabalulekile ukuba ukhethe iqonga lokurhweba kwangaphambili elinikezela usetyenziso olusebenzayo olupheleleyo. Ukuba le yinto enikezelwa ngumrhwebi, iya kuhlala iyahambelana nazo zombini izixhobo ze-iOS kunye ne-Android. Isizathu sokuba sicinge ukuhamba zokusebenza zokurhweba Kubalulekile kwinkonzo yethu yesiginali yeTelegram kukuba imeko ye-forex ihamba ngesantya esikhawulezayo.
Umzekelo, sinokuthumela umqondiso wokurhweba we-forex ofuna ukwenziwa kwangoko. Ukuba ukude kwisixhobo sakho esiphambili sedesktop - usaya kufumana umqondiso nge-app yeTelegram. Kodwa, ukuba awunakho ukufikelela kwi-akhawunti yakho ye-brokerage kwifowuni yakho, ngekhe ukwazi ukwenza umqondiso.
Kwakhona, onke amaqonga e-forex esacebisa apha kwiFunda 2 yoRhwebo inikezela ngeeapps ezikwiqondo eliphezulu. Oku kuyakuqinisekisa ukuba awusoze uliphose ithuba lokwenza enye yeempawu zethu zeTelegram!
Iimpawu ze-Forex kwiTelegram - Izicwangciso kunye namaxabiso
Ayicacanga into yokuba iqela lethu labathengisi abasebenza ngaphakathi kwi-Learn 2 Trade lisebenza nzima kakhulu. Basebenzisa iminyaka exabisekileyo yamava kwisithuba ukukuzisa eyona miqondiso yeTelegram ebalaseleyo.
Ngale nto engqondweni, sihlawulisa umrhumo weakhawunti yethu yepremiyamu. Kodwa, ngaphambi kokuba sifike kuloo nto, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba sikwabonelela ngenkonzo yasimahla yesiginali yeTelegram.
Sichaza ukuba oku kusebenza njani kwicandelo elingezantsi.
Ngokungena kukhangelo olulula lukaGoogle ngento ehamba nemigca 'yeeMpawu zeFree Forex' - uyakufumana amawaka eziphumo. Kungenxa yokuba indawo yomqondiso wokurhweba ixinekile kunye nabanikezeli ababonelela ngeenyanga ngentonga.
Njengoko uyazi, uninzi lwababoneleli alunakuze luhlangane ngokwenyani nebango elibukhali abalenzayo. Endaweni yoko, ziingcali kwintengiso enoburharha- emva koko zikuthembisa ngenzuzo 'eqinisekisiweyo' engenabo nabarhwebi abanezakhono abanokuze baphuphe bekwazi ukuyenza.
Ukuthatha igama elithile 'elinomthunzi' onawo umqondiso we-forex, thina kwi-Learn 2 Trade sinikezela ngenkonzo yomqondiso 'yasimahla' ngokupheleleyo. Ezi miqondiso ziza nazo zonke iinkcukacha eziphambili zedatha ezikhankanywe ngaphambili - njengokungena, ukulahleka kokuyeka, kunye nexabiso lokuthabatha inzuzo.
Ngamanye amagama, imiqondiso yethu yasimahla ye-forex ayenzi mnyama naluphi na ulwazi oludingayo ukuze wenze ngokuvisisana nesiphakamiso. Umahluko ophambili phakathi kweeakhawunti zethu zasimahla kunye neepremiyamu kukuba eyangaphambili ibonelela kuphela ngeempawu ezi-3 zetelegram ngeveki.
Ngokuchasene noko, iakhawunti yeprimiyamu iza nomndilili weempawu ezi-5 ngosuku. Nangona kunjalo, esona sizathu siphambili sokuba sinikezela ngesibonakaliso simahla seTelegram kukuba sifuna ukuba ubone ukuba lihambelana njani iqela lethu labarhwebi abasendlini.
Ngokuqinisekileyo, sinokwenza amabango anesibindi kakhulu njengabanikezeli abaninzi kolu shishino, kodwa oko ngekhe kuyinqumle. Endaweni yoko, ngokuqala ngeempawu zethu zasimahla ze-forex, unokuvavanya iingcebiso zethu zorhwebo ngaphandle kokubeka emngciphekweni isenti enye.
Ngapha koko, awudingi nomngcipheko kuyo nayiphi na imali oyithengisayo - njengoko unokusebenzisa iakhawunti yedemo ye-forex ukuvavanya iingcebiso zethu. Ngokwenza njalo, unokuvavanya ukuba ngaba imiqondiso yethu yeTelegram ye-forex ilungile kwiinjongo zakho zezemali kunye nesimo sengqondo sokubeka umngcipheko.
Iimpawu eziPhambili zeMali ye-Forex
Ubuninzi bamalungu oFundo 2 oRhwebo bakwi-akhawunti yeprimiyamu. Isizathu esiphambili soku kukuba amalungu e-premium afumana imiqondiso yeTelegram ye-forex yonke imini. Oku kugubungela yonke imimandla yexesha lehlabathi- ke ayinamsebenzi ukuba uhlala phi-uyakuba namathuba amaninzi okwenza imali.
Njengoko siphawulile kwicandelo elingentla, iakhawunti yeprimiyamu ihlala iza neempawu ezi-5 zeTelegram ngosuku. Ngoku, ngokwamaxabiso, siyiphakheji yenyanga elula nefanelekileyo enokurhoxiswa nanini na - akukho mibuzo ibuziweyo.
Unokukhetha kwiiphakheji ezintathu, ezidweliswe apha ngezantsi:
Njengoko ubona koku kungasentla, amaxabiso ethu esignali ye-Forex amaxabiso akhuphisana kakhulu. Ukuyibeka ngokunyanisekileyo- ukuba uzimisele ngokwenza inzuzo yexesha elide kwindawo yokurhweba ngemali, ke eyona ntlawulo iphambili yenyanga ye- $ 35 ikhuphisana kakhulu.
Kwaye, ewe, ukuba ubhalisela isicwangciso esithe kratya kancinci, ufumana eli xabiso lisezantsi nangakumbi. Ungalibali-thina kwi-Learn 2 Trade asikukutshixeli kwisivumelwano ongenakuphuma kuso. Ngokuchasene noko, unokurhoxisa umrhumo wakho nangaliphi na ixesha.
Qaphela: Unokufumana imiqondiso yethu ye-premium ye-forex simahla unyaka omnye. Konke okufuneka ukwenze kukuvula iakhawunti ngeLonghorn FX kwaye wenze idiphozithi. Emva koko, imeyile [imeyile ikhuselwe] kunye nekrini-skrini yeakhawunti yakho exhaswa ngemali ukufikelela!
Funda ii-2 zoThengiso zeMpawu zeMpawu ze-Forex-Iithagethi zenyanga
Ngokufana nomqondiso wethu weTelegram yomntu ngamnye, iqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlwini linethagethi ezininzi abazibekele zona inyanga nenyanga. Eyona nto iphambili koku 'yinqanaba lokuphumelela' lenyanga le-76%. Ukuba awuqhelananga nendlela ireyithi yokuphumelela esebenza ngayo, le yipesenti yezorhwebo eyimpumelelo efumaneke kwimpawu zethu kwithuba lenyanga.
Umzekelo, masicinge ukuba iisimboli zethu zeTelegram zathumela iingcebiso ezili-100 ngenyanga kaDisemba. Kwezi zorhwebo zili-100, ireyithi yokuphumelela engama-76% ingathetha ukuba ama-76 ayenenzuzo, ngelixa ama-24% aseleyo ayengenayo.
Ngale nto ithethwayo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba inqanaba lokuphumelela lahluke ngokupheleleyo 'kwimbuyekezo yotyalo-mali' yenyanga (i-ROI). Kungenxa yokuba eyangaphambili isixelela kuphela ukuba mangaphi okuphumelela kunye nokuphulukana namashishini ebesinawo ngexesha elimiselweyo. Eyokugqibela, nangona kunjalo, isixelela ukuba ingakanani inzuzo yemali esiyenzileyo ngenyanga-ngokusekwe kwisibonda esipheleleyo.
Masithi ngaphezulu kwenyanga kaJanuwari, iisimboli zethu zeTelegram zivelise i-ROI engama-35%
Lilonke, usebenze kwi-100 yezindululo zethu zokurhweba- ukubeka ama- $ 50 kwisikhundla ngasinye
Oku kuthetha ukuba xa iyonke, ukuphuma kwakho kwakuyi- $ 5,000
Kweli nani, wenze iipesenti ezingama-35 kwiinzuzo
Kananjalo, wenze i $ 1,750.
Le yeyona ndlela ilula yokubala inzuzo kunye nelahleko yakho yenyanga. Emva kwayo yonke loo nto, awuyi kuhlala ubamba isixa esifanayo. Ngapha koko, unokuba konke-kodwa-uqiniseke ukuba ubungakanani bakho bezorhwebo buya kwahluka kwisikhundla ngasinye.
Umzekelo, ngelixa urhwebo lwakho lokuqala lubeka umngcipheko kwi-1% ye-akhawunti ye-akhawunti ye-5,000, urhwebo lwakho lweshumi lunokuba semngciphekweni we-1.5% ye-6,000 yeebhalansi. Inqaku apha kukuba ngelixa i-win win history ye-76% ibalulekile, kuya kufuneka ukhumbule ukuba ubamba malini ngokweepesenti ngokuchasene ne-capital capital yakho iyonke.
Ezinye iiMpawu zeTelegram zamaQela e-Forex
Thina kwi-Learn 2 Trade sifuna ukuba amalungu ethu enze izigqibo ezinolwazi. Ngale nto engqondweni, apha ngezantsi sixoxa ngenani lamanye amaqela eesiginali ye-Telegraph okwangoku kwimarike.
Ngamalungu angaphezu kwama-21,000, iFXStreet liqela lesiginali yeTelegram enabantu abaninzi. Oku ikakhulu kubangelwa kukuphila kwabo ixesha elide- bebesebenza ngaphezulu kweminyaka eli-10. Ewe kunjalo, oku kukwathetha ngamandla ngokusebenza kweqela, kuba ngekhe likwazi ukutsala amalungu amaninzi kangaka.
Ngaphandle kwamathandabuzo, iqela lenza amabango anesibindi, anje nge-90% yokuchaneka kwenqanaba kunye nokufumana ukuya kwiipips ezingama-600 ngeveki. Isitalato iFX sinewebhusayithi, ngaphandle kweqela leTelegram, eligcina izinto ezinamandla. Izixhobo zemfundo, ukuqonda kwimarike ye-forex, ukukhula kweendaba ezibalulekileyo, kunye namaxabiso otshintshiselwano ngamaxesha okwenyani aphakathi kweminikelo yayo emihle. Zonke ezi zinto, kubandakanya ii-webinars zeveki kunye nohlalutyo lweevidiyo, ziyafikeleleka kuphela kwisicwangciso seprimiyamu.
Unokukhetha kwiinketho ezininzi zokuhlawula. Oku kubandakanya isicwangciso senyanga esixabisa i-35 yeedola, isicwangciso seenyanga ezi-3 esiya kuncitshiswa i-31.66 yeedola ngenyanga, kunye nesicwangciso seenyanga ezi-6 se- $ 26.66 ngenyanga. Nje ukuba wenze intlawulo, ufikelela kwiqela leTelegram, elibonelela ngenkxaso yabathengi yeeyure ezingama-24.
I-FX Pro ngumboneleli ophawu olisekhaya kubarhwebi bendlu abane. Aba barhwebi banamava bavavanya iimarike kwiindawo ezahlukeneyo zamaxesha, bejonga elona thuba lifanelekileyo lokuba ubeke urhwebo. Nje ukuba bachonge naliphi na ithuba elinje, bakwazise ngoko nangoko ukuze wenze isenzo kwiziphumo zomqondiso ngokukhawuleza.
I-FX Pro inokuduma okubonakalayo kwisithuba somnikezeli womqondiso we-forex. Njengabanye ababoneleli beempawu, bakwenze amabango anamandla, bethumela inqanaba lempumelelo lama-89 kuyo yonke imiqondiso eyi-100 ebonelelweyo. Benza amabango angaphezu kwe-1000 pips ngeveki.
Amabango eFX Pro okwahlula ngokwawo kwabanye ababoneleli ngokubonelela ngobhaliso lweveki. Isicwangciso seveki nganye sixabisa i-7 yeedola kwaye unokuthatha isigqibo kwangaphambili ukuba ufuna ukuzibophelela ixesha elide- usebenzisa iakhawunti yedemo ukuvavanya ukusebenza kwayo. Ukuba wanelisekile yile nto uyibonayo, ungaya kwisicwangciso senyanga okanye sekota.
Izicwangciso zobhaliso ezibanzi ngakumbi zinyanga ezintathu kunye nonyaka, ezixabisa i-120 kunye ne-380 zeedola ngokwahlukeneyo. Banobulungu be- $ 500-yobulungu obunika ubomi obungenamkhawulo kwiqela leTelegram.
Iipipchasers zincinci, sele zisebenza malunga neminyaka emine. Ukongeza ekunikezeleni imiqondiso kwi-forex, ufumana iingcebiso ngesenzo sentengiso kwizinyithi ezixabisekileyo (isilivere kunye negolide). Iqela labahlalutyi kwi-Pipchasers lenze uphando olunzulu lwetshathi ukuza nezorhwebo olucetyiswayo.
Ewe kunjalo, ingcebiso nganye evela kubaPipchasers, njengoko sisenza kuFunda 2 uRhwebo, igubungela yonke into ebonakalayo ukusuka kwisibini semali ukuya kuthabatha inzuzo kunye nokuyeka ukulahleka kwamaxabiso, kunye nexesha lokungena kwintengiso. Lonke ulwazi oluyimfuneko lufika kwiqela leTelegram ngexesha langempela.
Iziphumo, ngokweqela elikwiPipchasers, amanani ukuya kuthi ga kwi-1,500 iipipi ngenyanga. Babanga ukufezekisa oku ngokuthumela ukuya kwiimpawu ezi-3 ngosuku ngalunye. Njengabanye ababoneleli, kukho umrhumo wobhaliso.
Zintathu izicwangciso ezinomlinganiso ofanayo wenkonzo kodwa zahluka kubude bexesha onqwenela ukuqhubeka ufumana iimpawu. Izicwangciso ziqala ukusuka kwi- $ 59 ngenyanga ukuya kwi-149 yeedola kwiinyanga ezintathu kunye ne- $ 249 iinyanga ezintandathu. Ungarhoxisa umrhumo wakho nangaliphi na ixesha onqwenela ngalo.
Lo ngumboneleli weempawu ezimalunga ne-forex esekwe e-UK. IZiko le-Forex likwafaka amabango anesibindi kwiqondo lempumelelo le-85% kunye nokufikelela kwenyanga nge-1,500 iipipi, njengePipchasers. Kwakhona, ngokufanayo nabanye ababoneleli esixoxe ngabo, bathumela imiqondiso ngexesha langempela.
Iimpawu zigubungela iinkcukacha ezipheleleyo ezifunwayo- ezinje ngeerandi zemali eziza kuthengiswa, ukungena kunye nokuphuma kwamaxabiso, nokuba ngaba kukuthenga okanye ukuthengisa iodolo. Iziko le-Forex libonelela ngenkxaso kubathengi ngokukhawuleza kwiqela leTelegram nakwi-WhatsApp.
Kuya kufuneka uhlawule i-50 yeedola kangangenyanga ukuze ufikelele kule miqondiso ye-forex. Oku kuza nexesha lesilingo leentsuku ezi-3 ukuvavanya imiqondiso kwiakhawunti yedemo. Awunakubekwa tyala ngokucinga ukuba lifutshane kakhulu ixesha lokuqinisekisa amabango abo, ubuncinci kuba iimarike ze-forex zihamba ngesantya esikhawulezayo.
Nangona kunjalo, ungasirhoxisa isicwangciso nangaliphi na ixesha ukuba uziva ungonelisekanga ngumboneleli. Eyona nto intle ukuyenza kukusebenzisa ixesha lokuvavanya imiqondiso kwiakhawunti yedemo. Ukuba uthatha isigqibo sokurhoxisa, konke okulahlekileyo kukuphulukana ne- $ 50 yokuqala yesicwangciso- ngokuchasene nepesenti enkulu yenkunzi yakho yorhwebo.
Indlela yokujoyina iqela lethu leTelegram yeTelegram yePhondo
Ukuba uthanda isandi sokujoyina i-100% ecacileyo, iqela leTelegram ye-Forex elinexabiso eliphezulu-landela amanyathelo angezantsi ukuze uqalise ngoku!
Inyathelo 1: Vula iAkhawunti ye-Forex Broker
Njengoko besesitshilo ngaphambili, kuyakufuneka ube neakhawunti ye-broker esebenzayo ukuze wenze imiqondiso yakho. Ukuba sele unayo iakhawunti kunye nomthengisi owonwabileyo- ungatsiba uye kwinqanaba elilandelayo.
Ukuba akunjalo, ungasifunda isikhokelo sethu kweyona ilungileyo Abarhwebi be forex Apha. Awunalo ixesha lokufunda isikhokelo sethu? Ewe, ukuba ujonga isikhokelo ukuba yeyiphi indawo yokurhweba kwangaphambili ekufanele ukuba uyisebenzise ecaleni kweempawu zethu- ungafuna ukuzama i-Capital.com.
Le femi ilawulwa ngumrhwebi ikuvumela ukuba uthengise iimfumba zamabini amabini e-forex ngaphandle kwekomishini. Ukusasazeka kukwaxinene kwaye ngokulula ubeka kwaye urhoxise imali, ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlawula onokukhetha kuzo.
Nje ukuba une-akhawunti yexabiso eliphantsi lomrhwebi, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba yeyiphi na 2 isicwangciso soRhwebo ofuna ukusikhetha. Ukuba umtsha kwiimpawu kwaye ufuna ukusizama kuqala-ungaqala ngesicwangciso sasimahla. Oku kuya kukufumanela imiqondiso emi-3 ngeveki.
Ukuba imiqondiso emi-3 ngeveki ayikunqumli, isicwangciso seprimiyamu siya kukufumana malunga neempawu ezi-5 ngosuku. Ukuba ufuna ukuzama isicwangciso seprimiyamu ngaphambi kokwenza ukuzibophelela kwexesha elide, amaxabiso ke aqala kwi- $ 35 yenyanga. Ukuba ufuna ukufumana ixabiso, i-3 kunye ne-6-inyanga yeephakeji ziqwalaselwe kakuhle.
Nje ukuba ube nesicwangciso sokufunda 2 soRhwebo endaweni, ungaqhubeka nokukhuphela usetyenziso lweTelegram kwifowuni yakho. Unokwenza oku ngokuthe ngqo kwivenkile esemthethweni yeTelegram okanye uyikhangele kwiivenkile zikaGoogle zokudlala / zeApple.
Emva koko, qhubeka nokujoyina i-Learn 2 Trade Telegram group. Ngokwenza njalo, uya kuthi emva koko ufumane iisimboli zethu zeTelegram ngexesha langempela-ngqo kwifowuni yakho!
Isikhokelo seTragram yeTragram yesikhokelo: Isigqibo?
Isishwankathelo, ukufumana imiqondiso ye-forex ngokusebenzisa i-Learn 2 Trade Telegram yeqela kuya kukuvumela ukuba urhwebe ngeemali ngaphandle kokufuna ukwenza nawuphi na umthetho.
Oku kuthetha ukuba akukho cazululo lobuchwephesha okanye olusisiseko- kwaye akukho mfuneko yokuhlala kwisixhobo sakho iiyure xa usiya kumaxabiso ophando. Endaweni yoko, imiqondiso yethu yeTelegram ye-forex iya kuthumela isaziso kwifowuni yakho ngokukhawuleza xa kufika ithuba lokurhweba qiniseka ukuba usebenzisa elona qonga liphambili lokurhweba lase-UK kubaqalayo.
Ukuba ufuna ukugcwalisa amava ama-2 oRhwebo ngamava- ekwabandakanya ii-cryptocurrensets, izinto ezithengiswayo kunye nesitokhwe- iakhawunti yethu yeprimiyamu iya kukubonelela nge-avareji yeengcebiso ezi-5 ngosuku. Oku kuza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali kweentsuku ezingama-30- ke ukuba nangasiphi na isizathu awonwabanga, ungacela ukubuyiselwa imali ngokupheleleyo-akukho mibuzo ibuziweyo!
Yintoni iqela leTelegram ye-Forex?
Njengoko igama libonisa, le yinkonzo yomqondiso we-forex enikezelwa yi-Learn 2 Trade - eya kuthi ikuthumele iziphakamiso zorhwebo ngokuthe ngqo kwi-app yakho yeTelegram.
Lithini inqanaba lokuphumelela leNgcaciso yeNkonzo yoThengiso lwe-Forex yenkonzo?
Ngokwembali, siphumelele kwinqanaba lokuphumelela lama-76%. Oku kuthetha ukuba kuyo yonke imiqondiso esiyithumelayo, ezingama-100 zibuyisela inzuzo.
Ndazi njani ukuba inkonzo yakho yomqondiso we-forex isemthethweni?
Siyaqonda ukuba imeko yesiginali ye-forex ilawulwa ngamagcisa obuqhetseba. Kungenxa yoko le nto sinikezela ngeendlela zokukhusela. Okokuqala, isicwangciso sethu sepremiyamu siza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali kwiintsuku ezingama-30. Oku kuthetha ukuba ukuba nangasiphi na isizathu awonwabanga yinkonzo yethu, unokucela ukubuyiselwa imali ngalo naliphi na ixesha ngeli xesha. Ngapha koko, sikwabonelela ngenkonzo yomqondiso wasimahla. Oku kuyakufumana imiqondiso emi-3 ngeveki kwaye ikuvumele ukuba uvavanye inkonzo yakho ngaphambi kokuba unyusele iakhawunti yeprimiyamu.
Zeziphi izibini ezibonisa ukuba inkonzo yakho yesiginali ye-forex isigubungelo?
Inkonzo yethu yomqondiso we-forex igubungela uninzi lwezibini. Uninzi luvela ngaphakathi kweendidi ezinkulu nezincinci, nangona kunjalo, sigubungela i-exotic nayo.
Zibonakala njani iimpawu zakho zeTelegram ye-forex?
Zonke iimpawu zethu ze-forex ziza kunye neebini ezichaphazelekayo, nokuba ngaba kufuneka uthenge okanye uthengise, intengo yokungena, kunye nokulahleka kokuyeka kunye nexabiso lokuthatha inzuzo.
Funda ngakumbi amaNqaku anxulumene neTelegram yethu yeSikhokelo seSiginali:
Abona baQeqeshi baBalaseleyo be-FCA 2021-Funda urhwebo lwe-2
Amaqonga amaQhinga aPhambili okuRhweba ngeZinto eziBalaseleyo- Leliphi iqonga lokuRhweba ngeMali ePhambili kwi2021?
Khuphela i-PDF yethu ye-2021 yokuRhweba ngePaul!
Eyona Akhawunti ye-Demo ye-Forex ye-2021- Isikhokelo sabaQalayo esipheleleyo
Eyona Forex EAs 2021